🥇 ▷ Toddobo xeelad oo lagu maamulo Qaabka guud ee 'Xposed' ✅
Toddobo xeelad oo lagu maamulo Qaabka guud ee ‘Xposed’
Qaab-dhismeedka Xposed waa qaab loogu talagalay wax ka beddel ku samee taleefannada Android. Magisk hadda waxay ka adkaatay caannimadeeda, laakiin weli waa ikhtiyaar wanaagsan, gaar ahaan haddii aad rabto inaad ku neefsato nolol cusub garoonkii hore.
Mid ka mid ah wadeyaasha Qaabdhismeedka guud ee qaab dhismeedka waa in mar lagu rakibay iyadoo la adeegsanayo ay u fududdahay helitaanka iyo rakibidda cutubyada. Xitaa si kastaba ha noqotee, Xposed wuxuu gacanta ku hayaa in ka badan hal tuduc, oo halkan ayaan kuugu sheegaynaa sida loo weyneeyo.
Hel nooca saxda ah
Nooca loo yaqaan ‘Xured’ kaas oo wax laga beddelay inuu ka shaqeeyo taleefannada Samsung
Wadada Xposed waxay ku bilaabmaysaa rakibo, kaas oo, ka duwan Magisk, waa habka ugu adag maxaa yeelay ma jiro hab caalami ah oo u shaqeeya inta badan taleefannada gacanta. Haddii aad rabto inaad ku rakibto Xposed taleefankaaga gacanta, waxaad u baahan tahay inaad hesho nooca saxda ah ee noocaaga Android. Xusuusnow in rakibiyuhu la mid yahay, laakiin waxa isbeddelaya waa faylka aad ugu baahan tahay inaad ku shiddo taleefankaaga gacanta.
Kani waa nooca rasmiga ah, laakiin mararka qaar waad u baahan tahay nooca wax laga beddelay ee sumadda mobiilkaaga. Tusaale ahaan, soosaaraha Wanam XDA wuxuu sii daayay dhowr nooc oo modified loogu talagalay taleefannada Samsung.
Hadday hore u tahay Android 9 Cagta ama ka dheer, ma jiro nooc rasmi ah oo loo yaqaan ‘Xposed’, laakiin waxaa jira module Magisk oo beddelaya, sida EdXposed, Riru ama Taichi. Xaaladdan oo kale, xusuusnow in cutubku uu sidoo kale la jaan qaadayo noocaan ah Android si uu uga shaqeeyo.
Noocyada kaladuwan ee tas-hiilaadka.
Isaga oo ka hadlaya rakibaadda, haddii taleefankaagu xidid ku rakibayo ‘Xposed with installer’, asal ahaan waad haysataa saddex siyaabood oo lagu rakibo Qaabdhismeedka ‘Xposed’, in kasta oo laga yaabo inaadan ku arkin wax walba oo ku jira app-ka, gaar ahaan rakibaadda aan nidaamsaneyn, ee leh shuruudaha qaarkood. Kuwaani waa qaabab kala duwan iyo macnahooda.
Gudaha Vivo: Rakibaadda waxaa si toos ah looga sameeyaa arjiga, iyada oo aan dib loo bilaabin. Dabcan, waa inaad dib u bilawdo taleefankaaga si aad u dhaqaajiso Qaabka Nidaamka ‘Xposed’ iyo sidoo kale moduleka.
Soo kabashada: Haddii aad leedahay hab gaar ah oo soo kabasho ah sida TWRP, qalabka rakibaadda ‘Xposed’ wuxuu kaa caawin doonaa inaad kala soo baxdo faylasha lagama maarmaanka ah si aad gacantaada ugu cusbooneysiin karto habka soo kabashada.
Nidaam la’aan: Qaabkan wuxuu kaliya muuqan doonaa xaaladaha qaarkood, haddii taleefankaagu xidid ku yahay nidaam aan nidaam lahayn, oo kuu oggolaanaya inaad ku rakibto Xposed isla habkaas. Xusuusnow in Nidaamka ‘Xposedless’ uusan ka qalin jabin SafetyNet.
Hadday qalad dhacdo, ka daar
Waad ka saari kartaa Qaabka Qaab dhismeedka mashiinka rakibka laftiisa, laakiin… maxaa dhacaya haddii uusan Android bilaabin? Nasiib wanaagse waad awoodaa sidoo kale ka saar qaab ka soo kabashada, toosiso feylasha qaarkood iyo kuwa aad caadiyan isla mar isku hesho waxaad heleysid nooca aad ku rakibtid. Haddii kale, waxaad ka heli doontaa faylka ZIP halkan.
Xusuusnow waa inaad toosisaa nooca la taaban karo ee dhismahaaga guur-guura (ARM, ARM64, X86…) Haddii aad shaki ka qabtid, isla meeshii aad ku rakibtay qalab rakibaadda ‘Xposed Framework’, waa inaad raadsataa mid ku rakiban noocaas.
Ka saar moduleka habka ka soo kabashada
Hadaad firfircoontahay mowqifka ‘Xposed’ kaasoo faragelinaya nidaamka, nasiib wanaag waad awoodaa uninstall ka habka Android soo kabashada. Waxaad ubaahan doontaa hab soo kabasho oo aad la socoto maareeye faylka, sida TWRP, si aad u awoodaan inaad tirtirto faylasha qaar.
Fur maamulaha faylka oo gal gal xog / xog / de.robv.android.xposed.installer / conf /. Faylkaas tirtir faylka modules.list, oo ay ka mid yihiin liisaska cutubyada ku rakiban bilawga. Markii faylka meesha laga saaray, Xposed ma qaadi doono wax modules ah, kaas oo kuu oggolaanaya inaad kabo nidaamka oo aad ku rakibatid.
Waxaa loo daayay kuwa ugu dambeeya
Waa run in Xposed waxoogaa looga tegey sababtuna ay tahay awgeed, laakiin haddii aad soo degsatay noocaaga taxanaha XDA, waxaa laga yaabaa inaadan haysan nooca ugu dambeeya. Xaqiiqdii, waxaa jira saddex kanal oo rasmi ah oo noocaan ah: deggan, beta iyo tijaabooyin.
Guud ahaan, waxaad daneyn doontaa inaad isticmaasho kanaal deggan, laakiin haddii aad dhibaato ku qabtid, waxaad had iyo jeer isku dayi kartaa haddii lagu hagaajinayo nooc cusub. Si loo beddelo kanaalka cusboonaysiinta, waa inaad tagtaa Qaabeynta Qalabka Xareed.
U soo dejiso modulka noocaaga
Kaydka rasmiga ah ee maktabadda Xposed Framework wuxuu leeyahay in kabadan kun gal, laakiin nasiib daro majiro wado lagu shaandheeyo waxa ka shaqeynaya taleefankaaga gacanta oo uusan ku shaqeyn. Nasiib wanaagse, horumariyayaashu waxay heleen hab ay si hoosaad leh kuugu sheegaan, u muujiyaan Nooca Android ee xarafka magaca.
Tusaale ahaan, haddii aad raadsato GravityBox, oo ka mid ah modules-yada is-beddelka ugu dhameystiran, waxaad arki doontaa in uu jiro nooc sida GravityBox (P) (loogu talagalay Android Pie), GravityBox (O) (loogu talagalay Android Oreo) iyo wixii la mid ah. Soo degsashada nooca saxda ah waxay sare u qaadi doontaa fursadaha wax walboo ay ku bixi doonaan sida qorshuhu yahay.
Ugu horeyn loogu talagalay soosaarayaasha moodeelka ama adeegsadayaasha horumarsan, Xposed ayaa leh diiwaangelin faahfaahsan oo ku saabsan wax kasta oo dhacay boggaaga waxaad ka heli doontaa, dabcan, qaybtaas Soo gal ka soo rakibaha Xposed.
Waa tan Qaab-dhismeedka loo yaqaan ‘LogCat Xposed Framework’, oo ay ku jiraan farriimaha macluumaadka (laga bilaabo I) iyo khaladaad (laga bilaabo E). Ciladdan ayaa kaa caawin karta Eeg qaybtan si sax ah u shaqeynaynin iyo sababta oo ah